Abaninzi bethu sele beqala ukucwangcisa ebusika, ukuba kunokwenzeka njani ukusebenzisa iintsuku zamahhala ngelixesha leeholide zasehlotyeni kunye neenzuzo zezempilo. Ngethuba elifanayo, ngokuqhelekileyo bethu abemi bakhetha ukuchitha iiholide zasehlotyeni ngaphandle kwesi sixeko. Le ndlela yokulungiselela ixesha lakho lokukhulula ifanelekile ingqalelo. Xa kuthelekiswa neendlela zokuvakasha kumazwe angaphandle, ukuphumla okunjalo kuvumela ukufezekiswa okwaneleyo kubhajethi yentsapho. Ukongezelela, kubalulekile ukuqwalasela impembelelo enhle kwimpilo yeeholide zasehlotyeni ngaphandle kwesi sixeko. Yiyiphi into echazwe ngokuthe ngqo?
Okokuqala, ukuphumla ngaphandle kwesixeko kukunika ithuba okungenani kanye ngonyaka ngeentsuku eziliqela (okanye iiveki) ukuhlala kude nomzi kunye nesandi. Iingcali zenzululwazi ziye zabonisa ixesha elide ukuba ukungcola kwengxolo ezitratweni zezixeko ezinkulu kunefuthe elibi kakhulu emzimbeni womntu. Ngokomzekelo, ukuphambuka okunjalo kwimeko yempilo njengemphazamiseko emsebenzini weenkqubo zeentlanzi zithinteke kakhulu ngomsindo ogqithiseleyo kwiindlela ezixakekileyo kunye nezikwere.
Okwesibini, ngexesha leeholide zasehlotyeni ngaphandle kwesixeko, unokuzonwabisa ngokukhululekileyo unokukwazi ukuphefumula ngomoya ococekileyo ococekileyo, ongangcoliswa yimveliso yezityalo zasezidolophini kunye namafektri. Kuya kuba luncedo ngakumbi kubantwana ukuba bahlale eholide, njengoko banamathele ngakumbi kwimpembelelo engafanelekanga yomoya kunye nokungcola komoya. Inyaniso kukuba kwimimandla yasezidolophini ukungcoliseka komoya womoya kuphawulwe ngendawo ephantsi komhlaba. Kwaye abantwana abancinci, ngenxa yokukhula kwabo okuphantsi, bafumana impembelelo eyingozi kuyo yonke into engcolileyo kunokuba abantu abadala, abakwazi ukuthatha umoya ococekileyo ngaphandle kwimeko yokuphefumla ngenxa yokukhula kwabo. Kodwa, nangona kunjalo, ngexesha lokushisa kwehlobo kwiidolophu ezinkulu umoya wezitrato eziphambili zihlambulukile kangangokuba ukuhlala ixesha elide kuba yingozi kakhulu kwimpilo.
Okwesithathu, ngexesha leeholide zasehlotyeni ngaphandle kwesixeko, ngokuqinisekileyo unokutyelela ulwandle ogqithini lomlambo okanye echibini. Ngethuba lexeshana uza kuba nelithuba elifanelekileyo lokuqhuba iiseshoni zelanga kunye ne-air bath, kunye nokubhukuda edamini. Ezi nkqubo zinomdla kakhulu kwimpilo, kuba sele ichanekile. Ukongezelela, umphumo wokukhanya kwelanga emzimbeni wethu unempembelelo entle kwi-synthesis ye-vitamin D, ekuthintela ukuphuhliswa kwesifo esinobungozi njengama-rickets. Nangona kunjalo, ngexesha lokuphumla kufuneka ukhumbule ukuba ukuvulela umzimba wakho kwimpembelelo yelanga lelanga laseburhulumenteni kunqwenela kuphela kusasa okanye kusihlwa, kuba ikhefu lifumana i-ultraviolet emisebe yexesha elidlulileyo, elingakhuthaza ukuphuhliswa kwemiphunga yomhlaza.
Okwesine, iiholide zasehlotyeni ngaphandle kwesixeko zingaba nempembelelo entle kwimpilo ngenxa yokuba kunokwenzeka ukuqhutyiswa komsebenzi wemoto. Umsebenzi omzimba owenziwe ngamandla ngemizimba yomzimba ngexesha lokuhlamba okanye ukugijima endleleni yehlathi, kukhuthaza ukusetyenziswa kwamatye enamafutha kwaye ngaloo ndlela unempembelelo efunekayo kwinkqubo yokuphelisa umzimba. Ukongezelela, umsebenzi osebenzayo emoyeni omtsha unomdla wokuzaliswa komzimba nge-oksijeni, okuphucula iinkqubo zesisombululo.
Kwaye, ke, awukwazi ukulibala malunga nokunyuka kwamahlathi amaqabunga kunye nama-mushroom - ezi zinto zixabisekileyo zendalo, unokupheka iintlobo ezininzi zokutya ezinokunceda ngazo zonke iivithamini neemaminerali eziyimfuneko
Ngaloo ndlela, ukhetha ukukhetha ikhefu zasehlotyeni ngaphandle kwesixeko, unokuba nefuthe elibi kwimpilo yomzimba wakho.
Siyavuyisela kwiNkunzi yoMnyaka kwivesi
Iinkalo eziphambili zeprogram ye-spa
Iingcambu ezimbi kakhulu ezililayo
Luhlobo luni lwemozulu elindeleke eMoscow naseMoscow ngoSeptemba 2016 - i-Forecast forecast kwiziko le-Hydrometeorological Centre
Yiyiphi i-Decoration Style Style?
Izizathu zokugwenxa nokulala ngukuhlwa
Ukuphefumlelwa kwendawo yebhayisiki